eNasha.com - विश्वकै राम्रा पर्यटक को ?
विश्वकै राम्रा पर्यटक को ?
संसारमै भ्रमणका लागि धेरैभन्दा धेरै रुचि राख्ने भनी नाम कमाएका जापानीहरु सबैभन्दा असल पर्यटक पनि हुन् भनेर हालै एक अध्ययनले देखाएको छ ।
एपी समाचार संस्थाका अनुसार जापानीहरुपछि अमेरिकी र स्वीस सबैभन्दा बढी घुम्ने पर्यटकमध्ये रहेका छन् । यो कुरा यूरोपभरिका होटल व्यवसायीहरुसँग गरिएको अध्ययनपछि बाहिर आएको हो ।
जापानीहरु ज्यादै नम्र र भद्र रहेकाले अमेरिकीहरुभन्दा ३५ प्रतिशत बढी मत पाएका थिए । त्यस्तै चूपचाप रहन मन पराउने स्वीस पर्यटकहरु पनि तेस्रो नम्बरमा परेका छन् । तर बेलायतीहरुलाई सबैभन्दा अभद्र पर्यटकको सूचिमा राखिएको छ । तिनको अभद्र व्यवहार, हल्ला गर्ने बानी र टिप्स दिन पनि कञ्जुस्याइँ गर्ने आदि कारणले ती पाँचौँ नम्बरमा परेका हुन् ।
यति हुँदाहुँदै पनि होटल व्यवसायीहरु बेलायतीहरुको खर्च गर्न रुचाउने बानीलाई ज्यादै मन पराएका छन् । अमेरिकी र रुसीहरुपछि सबैभन्दा बढी पैसा खर्च गर्न यिनीहरु नै अघि बढ्ने गरेको होटल व्यवसायीहरुको अनुभव छ ।
यूरोपका १५ हजार होटल व्यवसायीहरुसँग यात्रासम्बन्धी वेबसाइट एक्सपेडियासँगको सहयोगमा गरिएको यस अध्ययनले फ्रान्सेलीहरु सबैभन्दा कम घुमन्तेमा गनिन्छन् । त्यसपछि भारतीय, चिनियाँ र रुसी पर्यटकहरु यो सूचिमा रहेका छन् ।
रोचक त अरु पनि छ । अध्ययन अनुसार होटल व्यवसायीहरुको नजरमा सबैभन्दा खराब लुगा लगाउनेमा बेलायती र अमेरिकीहरु रहेका छन् । जर्मनहरु चाहिँ यो सूचिमा पाँचौँ अङ्कमा परेका छन् ।
यस्तो पनि ! माया सुन्दरी सेलेब्रिटी मुद्दा मामिला मूर्ख्याइँ गुगल इन्टरनेट बलिउड भव्यता विज्ञापन नग्नता श्रीमानश्रीमती प्रविधि कीर्तिमान परिस्थिति फट्याइँ उदेकलाग्दो उपाय हलिउड
sex dating divorce cheating kissing marriage honeymoon friends tips gifts breakup infidelity parties know women attracting girls know men attracting guys flirting love personal valentine's day ex-love occassion fun read